SP-G10B SOICARE 180ml Ultrasonic Air Humidifier Moon Light Aromatherapy Electric Bamboo Ceramic Diffuser, China SP-G10B SOICARE 180ml Ultrasonic Air Humidifier Moon Light Aromatherapy Electric Bamboo Ceramic Diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited Xirmooyinka
SP-G10B SOICARE 180ml Ultrasonic Air Humidifier Moon Light udugga Korontada Bamboo Ceramic Diffuser
SOICARE 180ml Ultrasonic Hawo Humidifier Moon Light Udugga Korontada Bamboo Ceramic Diffuser
Order Tirada Yar ee:
180 * * 180 250mm
Qeybaha 10000 bishiiba
shuruudaha lacag bixinta
T / T, LC, PAYPAL, CAYMISKA ALIBABA, PAYONEE
· Multifunctional - Mila Fududeeyaha saliida lagama maarmaanka u ah wuxuu isku daraa diffuser udgoonka iyo laambada habeenkii hal.
· Naqshadeynta Dabiiciga ah iyo Minimalist - Daboolka dhoobada gacmeed ee quruxda badan leh ee salka baasaboorka, waxay si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmi kartaa qurxin kasta, taas oo waliba ka dhigaysa xulasho weyn hadiyad gaar ah
· Awoodda 180ml - ku rid 5-10 dhibcood oo saliid muhiim ah haanta biyaha, ceeryaanta faafisa ilaa 8 saacadood oo isdaba joog ah ama 18 saacadood oo goos goos ah.
· Loogu talagalay Hurdada Iftiinka: 2-heer habeen diiran diiran iyo iftiin neefsasho. Shaqada caawiyeha hurdada ayaa si toos ah u xiri doona laambadda nus saac kadib. Iftiinka habeenka iyo faafiyaha si gooni ah ayuu u shaqeyn karaa. Diffuser ma sameeyo wax qaylo qunsuliyadeed ah oo xanaaq badan.
· Xirmada waxaa ka mid ah: Diffuser wuxuu la socdaa 6.2 ft adabtarada awoodda dheer, buuga isticmaalaha iyo hagaha isticmaalaha degdegga ah.
Qalabka aasaasiga ah
dhalaalaya, qawdhan, qaabka neefsashada
15-25ml / saac
Awooda haanta biyaha
157 * * 157 187mm
Sanduuqa kartoonka (12 meelood)
490 * * 330 390mm
SP-USB11 120ml Cute Animal Shape Mini Saliidaha Muhiimka ah ee USB Aromatherapy Diffuser